XOG: In Maaliyada Kooxdii Ay Wajahayeen Ay Ku Ciyaareen, In Hal Gini Oo Kaliya Lagu Iibiyay Iyo Afar Xaqiiqo Oo Waali Ah Oo Ay Suurtogal Tahay In Aanad Kooxda Chelsea Ka Ogayn. - Gool24.Net
XOG: In Maaliyada Kooxdii Ay Wajahayeen Ay Ku Ciyaareen, In Hal Gini Oo Kaliya Lagu Iibiyay Iyo Afar Xaqiiqo Oo Waali Ah Oo Ay Suurtogal Tahay In Aanad Kooxda Chelsea Ka Ogayn.
October 22, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxaha kubbada cagta aduunku waxay ku kala duwan yihiin taariikhda ay soo mareen, koobabkii ay ku soo guulaysteen iyo waliba dhacdooyin badan oo loo soo diwaan galiyo laakiin mararka qaar waxaa suurtogal ah in jiilka cusub ee koox taageeraa ayna ogayn waxyaabo badan oo kooxdooda ku soo dhacay intii ayna iyagu xataa jirin ee ayna aduunka iman.
Dhacdooyinka qaar waa kuwo caan ah oo ay suurtogal tahay in loo sameeyo maalin la xusuusto halka kuwo kale yihiin kuwo aan inta badan la xusuusan balse marka laga sheekeeyo ay dad badan la yaab ku noqoto in ay qodobo sidaas oo kale ahi ka jireen kooxda ay taageeraan.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qodobo ay suurtogal tahay in anad ka ogayn kooxda Chelsea kuwaas oo waali u muuqda marka aanad jirin waqtigii ay dhaceen, waxaana ka mid ah dhacdooyin xusuus badan ku reebay jamaahiirta Blues ee waqtigaas kooxda taageerayay.
Haddaba halkan kaga bogo afarta qodob ee aanu halkan idiinku soo diyaarinay kuwaas oo ay hubaal tahay in ay layaab ku noqon karaan qof kasta oo aan hore u ogayn.
4- In Chelsea Lagu Iibiyay £1 Oo Kaliya Sanadkii 1982
Sanadkii 1982 kii waxay Chelsea gashay xaalad qalalaase dhaqaale oo waali ahaa waxayna gashay dayn lacageed oo 1.5 milyan gini ah taas oo waqtigaas ahayd lacag aad u badan waxayna kooxda Chelsea markaas qiimo ahaan todobaadkiiba luminaysay £12,000 kun oo gini.
Laakiin markii ay xalaadu sii xumaatay waxaa hal gini oo kaliya Chelsea ku iibsaday Ken Bates kaas oo la wareegay kooxda oo lagu leeyahay dayn dhan 1.5 milyan gini taas oo waqtigaas ahayd lacag aad u saraysa waana qiimaha u hooseeyay ee uu kooxda ku iibsaday.
Mar haddii uu Ken Bates aqbalay la wareegista dayntii £1.5 milyan ginida ahayd waxa uu heshiiskaasi caan ku noqday in uu bixiyay £1 oo kaliya si uu mulkiyada kooxda Chelsea uu ula wareego sanadkii 1982 kii.
Ken Bates ayaa ku guulaystay in uu Chelsea sare uga soo qaaday xaaladii dhaqaale xumo ee ay ku jirtay laakiin markale waxay qalalaase dhaqaale gashay snaadkii 2003 markaas oo uu Ken Bates kooxda ku iibiyay 60 milyan gini wuxuuna ka sameeyay faa’iido badan kooxdii uu kula wareegay 1.5 milyan gini oo dayn ahaan loogu lahaa iyo hal gini oo kaliya.
Kadib markii uu Ken Bates oo Chelsea kula wareegay 1 gini oo kaliya uu wareejiyay waxaa mulkiyada Chelsea si buuxda ula wareegay mulkiilaha hadda ee Roman Abramovich kaas oo saamigii Blues oo dhan ku helay 80 milyan gini wuxuuna Ken Bates iibsaday kooxda Leeds United.
Bogga 2-aad Ilaa 4-aad Kaga Bogo Faah Faahinta Qodobadan Xiisaha Badan.